Barbie Lalao ho an'ny tovovavy-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Ny ankehitriny saribakoly fotsiny dia tsy tsara tarehy sy omena tantara sy ny toetrany. Dia tonga andiany iray manontolo mihitsy aza, fa Barbie tonga amin'ny wardrobes vaovao, fanaka, ary afa-tsy ny fofombadiko, Kenn, mahatoky sy tsy mandao ny blonde hatsaran-tarehy. Noho izany dia afaka milalao maimaim-poana amin'ny aterineto, ary ny lalao ny Barbie, stylish io kilalao momba ny lamaody, famolavolana asa. Io zaza io saribakoly akanjo sy tia mandeha, kafanam-po mahafehy karazany ny asa, ary manasa anao asa ity. Miara-, mianatra zava-baovao mahaliana kokoa, ary raha ny orinasa, dia tsy mampaninona.
Fashion maodely Barbie
Barbie Lasa An Actress
Sarin'ny Barbie Hero Face
Ny Restaurant Fast Food Barbie
Famaranana Barbie & namana
Angony ny andriambavy tao amin'ny Krismasy Ball
Barbie Crazy lisitry ny
Winter mpivady Endrika Ivelany
Barbie ny Book Club
Barbie Ary Ken Spring City Break
Ellie Halloween Trick na fitsaboana
Vaovao Barbie Smart Phone
Barbie sy Ken Noely
Barbie sy Friends Fairy Party
Cinderella & Barbie Teen Fifaninanana
Anabavy Princess Fitaka Sekoly
Barbie ny, ampiasain'ireo tantsaha Dress
Barbie ny mpifankatia, ampiasain'ireo Dress
Mpanotrona ny mpanambady Dress Designer Fifaninanana
Ny Wedding Tropical Barbie
Barbie Air mpandray vahiny Style
Hero Ellie fototr'izany Faharesen'i
Hero Ellie Bevohoka Spa
Fampakaram-bady andriambavy selfie
Barbie dia te ho printsy
Barbie Fashion Show Dingana
Barbie sy Lara Red Carpet Challenge
Barbies Secret manorotoro
Miara-miasa amiko i Barbie
Elsa sy Barbie Date Fashion
Barbie sy Ken Pin My Outfit
Barbie Polka teboka Style
Barbie Ary Harley Quinn Bffs
Barbie Princess Ary Popstar
Barbie`s Powerpuff Endrika Ivelany
Barbie`s Jereo Powerpuff
Lalao Barbie tamin'ny Category:
Farany Barbie lalao
Barbie Extra Maze
Boky fandokoana saribakoly Barbie
Ny Barbie Dream Fairy
Antoko Barbie Pajama
Fivarotana tatoazy mahatsikaiky Barbie
Trano nofinofin'i Barbie
Dokotera Barbie tanana
Barbie zazavavy plastika
Lalao Online Rehetra Barbie Lalao ho an'ny tovovavy-tserasera
Biography mahery fo Barbie Lalao
ankizivavy tia Barbie, fa vitsy ny olona mahalala ny anarany feno ny saribakoly - Barbara Millicent Roberts, teraka tamin'ny taona 1959, ary ny ray aman-dreniny - Elliot Handler sy Ruth. Amidy vao teraka blonde nampiasa ny teny faneva "Fashion Modely Tanora", izay nadika hoe "Modely-tanora", na ivelany dia nijery toy ny vehivavy amin'ny mahaforona mamirapiratra. Nandritra ny taona, ny famolavolana Barbie no niova imbetsaka, mandra-pahatongany ho tonga tahaka izany koa ankehitriny. Tamin'ny 1961, ny saribakoly efa nahazo ankizilahy, Ken Carson, tamin'ny 1963 - ny sipany Midge, ary tamin'ny 1964 izy nanana rahavavy kely kapiteny.
Noho izany lazany, Barbie haingana nahazo akanjo tsara tarehy, firavaka, fiara, ary ny trano lehibe, tranon sy ny zavatra hafa. Ny fitomboan'ny isan'ny novidiny hatreto, efa fanaovana ny tena renivohitra. Isaky ny faniriana, dia tsy ho vita ny hividy ny zava-drehetra, ary na dia ny tsara manonofinofy manokana, dia ho sarotra ny nokapohiny nitoe-jaza ny toe-draharaha, raha tsy manan-danja ny Atitany faritra na akanjo. Dia Barbie lalao ho an'ny ankizivavy dia lasa malaza toy ny mahery fo ny tenany.
Nandritra ny Barbie lalao amin'ny aterineto, ny zavatra rehetra azo atao
Miaraka Barbie afaka hilalao ao amin'ny reniny-vavy
mba hahafehy ny asa
Fantaro ny lamaody fomba
Mianara mahandro sakafo
mba ho famoronana
Barbie lalao ho an'ny zazavavy dia nitombo fahafahana saribakoly mpankafy. Tsy mandany vola, dia afaka nilomano tao amin'ny rendrarendra ny akanjo sy ny firavaka, mba handeha tsy misy fameperana ny firenena, mba handeha hiantsena ny akanjo vaovao, dia tsidiho ny toeram-pisakafoanana-damaody sy an-tsehatra.
ny mpanoratra ihany koa ny manolotra virtoaly mahafinaritra ny milalao ho an'ny ankizivavy Barbie ka jereo hoe inona ilay izy amin'ny fahazazany. Barbie zazakely mahafatifaty fotsiny, ka hikarakara azy tsara indrindra. Nihalehibe, izy naneho fahaiza-mamorona, ary miara-dia mitsidika ny Ballet School, mahita ny tenanao an-tsehatra miaraka amin'ny hira voalohany na ny dihy, mianatra mampiasa zavamaneno.
fety tsirairay dia fotoana mba hahita ny karnavaly akanjo, na akanjo tsara tarehy ho tonga amin'ny make-up, manicure sy ny volo. Miaraka, dia handravaka ny efitrano Barbie sy manomana sakafo matsiro. Ary raha ny fetibe dia hatao, dia manadio ny trano, ary nony nahita toerana mangingina ny fako. Barbie lalao an-tserasera mampanantena tsy hay hadinoina maro mandeha teo amin'ny antokon'i havany na ny namany. Dia hamangy ny paradisa nosy, niakatra ho any amin'ny avo tendrombohitra, dia tsidiho ny toerana malaza eto amin'izao tontolo izao. Ary mba hitsapana ny tenany amin'ny samihafa, raha tsy mbola tonga fanampiana Barbie hahita ny endrika mifanaraka amin'ny toerana.
kely kokoa zava-mahaliana momba ny Barbie
Barbie toa efa tena zazavavy, satria ho azy, ary nanoratra ny tantaram-piainany. Voalohany, dia manapa-kevitra izay dia an-trano ny hazomalahelo - tanàna kely iray any Wisconsin, ary ny ray aman-dreny - Margaret sy George Roberts. Fa rehefa nazava fa ny naoty ny saribakoly mbola mitombo, tamin'ny 1990, dia nihevitra fa toy izany tovovavy mihaja tokony ho teratany avy New York City.
Tamin'ny taona 2004, Barbie sy Ken nisaraka, ary rehefa afaka roa taona indray mandeha indray tafaray indray, na dia mbola tsy nanambady. Fa ny namany - Midge sy Alan, nivady tamin'ny 1991, ary na dia niteraka kambana. Fa tamin'ny 2013, fa izahay Midge namorona sary vaovao, ary ankehitriny dia ny tsy niteraka ary tsy manam-bady indray.